२०७३ बैशाख २३ बिहिबार, एजेन्सी । यो खबर सुनेर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । एउटा देश । जहाँ धेरै जसो युवाहरु विवाह गर्नबाट भाग्छन् । उनिहरु एक्लै बस्न रुचाउछन् । सोही कारणले सो देशको जनसंख्यामा पनि गिरावट आएको छ । यो कहानी अन्य देशको नभएर जापान हो। जापानको एउटा इन्डस्ट्री धेरै रङ्गी विरङ्गी छ । यो 'लभ इन्डस्ट्री' हो । जापानको बजारमा फरक-फरक तरिकाका सेवा पाइन्छ । खुशी पाउनको लागि पुरुष महिलाबाट पिटाई खाने सेवा लिन्छन् । अमेरिकाको प्रतिष्ठित न्यूज सर्भीस वाइसको एक ड ... बाँकी अंश»
१३०० बच्चाका बुबा यिनै हुन‍् 'हुलाकी' ,यिनिबारे किताब लेखिदैछ
२०७३ बैशाख २१ मंगलबार, एजेन्सी । तपाइले एक मानिसको १० देखि २० जना सम्म बच्चा भएको सुन्नु भएको छ । तर तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? कुनै एक मानिस १३०० बच्चाका बुबा बनेका छन् । यो कुरा सुन्दा जो सुकैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर एक व्यक्ति त्यस्ता छन्, जसले यति धेरै महिलासँग सम्बन्ध बनाए कि उनका बच्चाको संख्या १३०० पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम डेली मेलका अनुसार १३०० बच्चाका बुबा ८७ वर्षीय एक हुलाकी हुन् । यी हुलाकीले आफै सो बयान स्वीकारेका छन् । उनले भने,' ६० को दश ... बाँकी अंश»
२०७३ बैशाख १७ शुक्रबार, एजेन्सी । इन्डोनेसियाको प्रहरीमा भर्ती हुन महिलाले भर्जिनिटी टेस्ट पास गर्नु पर्छ । भर्जिनिटी टेस्ट विवादित 'टू फिंगर टेस्ट' बाट गरिन्छ । मानव अधिकारवादि संगठन र मीडियाको आलोचनाका बावजूद पनि सरकारले सो टेस्ट बन्द गर्ने तदारुकता देखाएको छैन । ... बाँकी अंश»
विन लादेनलाई मार्न पाकिस्तान सरकारकै हात
२०७३ बैशाख १५ बुधबार, एजेन्सी । आतंककारी संगठन अलकायदा नेता ओसामा विन लादेनलाई मार्न पाकिस्तानी सरकार र सेनाले अमेरिकी सेनाको मद्दत गरेको खुलेको छ । एक अमेरिकी पत्रकार सेमूर हर्षले आफ्नो नयाँ किताब 'द किलिग अफ ओसामा विन लादेन' मा पाकिस्कतानले सीआईएका स्टेशन अफिसर जोनाथन बैंक र पाकिस्तानी सेना बीच लगातार सम्पर्क भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । पाकिस्तानी सेनाका एक प्रमुख अधिकारीले जोनाथन बैंकलाई भेटेर लादेन रहेको ठाँउको जानकारी दिएका थिए । जब सीआईएले ला ... बाँकी अंश»
५०० वर्ष कसरी बाचे रूसी राष्ट्रपति पुटिन ?
२०७३ बैशाख १४ मंगलबार, एजेन्सी। सामाजिक सञ्जालमा पछिल्लो समय रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उमेरको समाचार भाइरल भइरहेको छ। भनिन्छ, पुटिन विश्वमा कम्तिमा पनि ५०० वर्ष देखि फरक-फरक रुपमा रहे। सो समचारलाई पुष्टी गर्न अलग-अलग तस्वीर समेत पोप्ट भए। जसमा उनको तुलना मोनालिसाको पेन्टिंग र रूसी सैनिकसँग गरिएको छ। ... बाँकी अंश»
गर्भवती महिलाको पेटमा देखिए यशु, अल्ट्रासाउण्ड गर्ने डाक्टर भए हैरान
२०७३ बैशाख १३ सोमबार, एजेन्सी। पश्चिमी देशहरुमा धेरै पटक चर्चा हुने गर्छ,-पश्चिमाहरुले यशुको दर्शन गरेका छन्। कहिले कसैले यशुलाई बादलको आकृतिमा देखे भनेका छन् त कहिले खाने भाडोमा ।पछिल्लो समय चिकित्सक यस्तै एउटा विषयलाई लिएर हैरान भएका छन्। जब एक गर्भवती महिलाको अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्टमा क्रसमा झुन्डाइएको यशुसँग मिल्ने आकृति देखे अनि चिकित्सक हैरान भए। ... बाँकी अंश»
यी हुन् विश्वका सबै भन्दा हट र सेक्सी एयरहोस्टेज भएका एयरलाइन्स
२०७३ बैशाख १२ आइतबार, एजेन्सी । आर्थिक मन्दीको क्रममा विश्वका सबै क्षेत्र डामाडोल हुदा त्यसको असर उड्डयन क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । घाटाको यो अवस्थामा विश्वका चर्चित एयरलाइन्सहरुले नयाँ रणनीति अख्तियार गरे । सामन्यत: उड्डयन क्षेत्रमा आर्थिक जोह टिकट विक्रीबाट हुने गर्दछ । पटक-पटक टिकटको मूल्य बढाउदा यात्रुको संख्यामा कमी आउने खतरा पनि सो क्षेत्रमा छ । यसैले एवियेशन इन्डस्ट्रीमा बिकिनी एयरहोस्टेज र हट एयरलाइन्सको चलन सुरु भएको छ । ताकि यसबाट विमान लोड होस् र पैसा मनग्य ... बाँकी अंश»
विकिनी मोडलका ताँती, तात्यो माहोल !
२०७३ बैशाख ११ शनिबार, एजेन्सी। गर्मीको समयमा प्रशारित हुने बेलायतको एक रियालिटी टेलिभिजन कार्यक्रम लागि स्पेनको मारबेलास्थित एक क्लबमा हालैमा एक शानदार पार्टीको आयोजना गर्‍यो। उक्त कार्यक्रममा सहभागी कलाकारका लागि बिहीबारका दिन मारबेलाको समुन्द्री तटमा पार्टीको आयोजना गरिएको हो। पार्टीका कारण मारबेलाको समुन्द्री तटमा विकिनी मोडलहरुको ताँती देखियो। विभिन्न अवतारमा उपस्थित मोडलहरुले उक्त क्षेत्रको रौनक नै छुट्टै बनेको थियो। ... बाँकी अंश»
बजरङ्गबलीको तागत: बादरले एकै परिवारका तीस सदस्य बचायो
२०७३ बैशाख १० शुक्रबार, एजेन्सी । बैङ्गलोरमा एक बादर बजरङ्गबलीनै बने । हनुमानझै संकट मोचन गरेर ३० व्यक्तिको ज्यान जोगाए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार बैङ्गलोरको श्रीरंगापट्टनममा रहेको कावेरी नदी किनारमा एउटा रुख मुनि परिवारले धार्मिक अनुष्ठानको कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो । सो धार्मिक अनुष्ठानमा एकै परिवारका ३० सदस्य सहभागि थिए । सो रुखको माथि तिनै संकट मोचक बादर थिए । बादरले अनुष्ठानमा बसेका मानिसलाई हैरान पार्‍यो । बदमासीको हद नाघ्दै बादरले मुत्र विसर्जन ... बाँकी अंश»
कुनै देशका भगवान् कुनैमा बहान !
२०७३ बैशाख ४ शनिबार, एजेन्सी । नेपालमा गाईलाई भगवान्‌को रुपमा पुज्ने परम्परा रहेको छ । गाई नेपालको राष्ट्रिय जनवार पनि हो । तर स्विजरल्यण्डको एक फर्ममा गाईलाई बहानको रुपमा प्रयोग गर्दछ । घोडामा जस्तै गाई माथि यात्रा गरेको देखेर स्विजरल्यण्ड पुगेका भिजिटर्सहरु छक्क पर्ने गर्दछन् । हालै स्विजरल्यण्डको बोल्डरहोफ फार्ममा गाई माथि पर्यटकहरु यात्रा गर्दै गरेको तस्बीरहरु सार्वजनीक भएको छ । यी गाई जङ्गली नभएर डेरी फर्मका हुन् । गाईमा यात्रा गर्दा गाईको हिडाइ ... बाँकी अंश»
यस्तो छ, ५ हेलिकप्टर बोक्ने क्षमता भएको अमेरिकी विमान !
२०७३ बैशाख ३ शुक्रबार, एजेन्सी । यो तस्वीर अमेरिकी एयर शोवाट लिइएको हो । यस फोटो हेर्दा सबैको ध्यान ठुलो मालवाहक विमान जान सक्छ, जुन विमानलाई सी-५ सुपर गैलेक्सी भनिन्छ । लाकहीड मार्टिन कम्पनीले यसको पुरानो भर्जन केहि बर्ष पहिले बनाएको थियो । विमान सँगै छेउमा सी-१३० हर्कुलस विमान रहेको छ जसलाई कयौ देशमा जम्बो बिमान पनि भन्ने गरिन्छ । यसका साथै तस्विरमा छोटो आकारका फाइटर प्लेन पनि देख्न सकिन्छ । ७५.५३ मीटर लामो र १९.८४ मीटर ऊचाई भएको सी-५ सुपर गैलेक्सी विमान बारूद ... बाँकी अंश»
आँखालाई धोका दिने तस्वीर
२०७२ चैत २८ आइतबार, एजेन्सी । हाम्रो जीवनमा 'समय' अतिनै महत्वपुर्ण हुन्छ । कुनै कामलाई परफेक्ट बनाउन त्यसलाई सहि समयमा गर्न आवश्यक छ । यदि फोटोग्राफीको कुरा गर्ने हो भने त टाइमिंग अझ महत्वपुर्ण हुन्छ । परफेक्ट टाइमिंगले तपाई परफेक्ट पिक्चर लिन सक्नुहुनेछ र यदि एक सेकेण्ड फरक परेमा फोटोको एंगलनै बिग्रन सक्दछ । हेरौ परफेक्ट टाइमिंगमा खिचिएका तस्वीरहरु । ... बाँकी अंश»
ठूलो स्तन नै हो यी सुन्दरीहरुको पहिचान
२०७२ चैत २७ शनिबार, एजेन्सी। विश्वमा मानिसहरु विभिन्न कारणले समाजमा चिनिने गर्छन् । तर, केही यस्ता पनि मानिसहरु हुन्छन्, जो आफ्नो योग्यता, क्षमता र अन्य विभिन्न कारणले विश्वभर नै चर्चित हुन पुग्छन् । यस्तैमा केही युवती–सुन्दरीहरु छन्, जो आफ्नो ठूलो स्तनका कारण नै विश्वमा चर्चित छन् । तिनै मध्येका केही युवतीहरुका बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
चौलागाईं प्रतिष्ठानमा होमनाथको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित
२०७२ चैत २६ शुक्रबार, काठमाडौ । नेपालभरका भारद्धाज गोत्रिय चौलागाईंहरुको छातासंगठन चौलागाईं प्रतिष्ठानको छैठौं साधारण सभाबाट होमनाथ चौलागाईंको अध्यक्षतामा कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी प्रथम उपाध्यक्षमा बद्रीप्रसाद चौलागाई, दृतीय उपाध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र चौलागाईं र तृतीय उपाध्यक्षमा प्रेम चौलागाईं निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा रमेशप्रसाद चौलागाईं र कोषाध्यक्षमा अर्जुन चौलागाईं निर्वाचित भएका छन् भने सचिवमा देवेन्द्र चौंलागाईं निर्वाचित भएका छ ... बाँकी अंश»
यी हुन् आँखालाई बाहिर निकालेर भित्र छिराउन सक्ने व्यक्ति (भिडियोसहित)
२०७२ चैत २५ बिहिबार, एजेन्सी । विश्वका हरकोही मानिसमा अलग–अलग विशेषता हुन्छन् । फरक–फरक रुची, आचरण र बानी–ब्यबहारले नै एक मानिस अर्को भन्दा भिन्न देखिने गर्छ । तर, विश्वमा केही यस्ता मानिस पनि हुन्छन्, जसको विशेषता–क्षमता विचित्र किसिमको हुन्छ । त्यस्तै एक विशेष विशेषता भएका व्यक्ति मध्येका हुन्, इंग्ल्याण्डको लिभरपुलका जोन ड्योल । जोन आफ्नो आँखालाई थोरै बाहिर निकालेर पुनः भित्र छिराउन सक्छन् । ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत २२ सोमबार, एजेन्सी। हाम्रो देश नेपाल मात्र होइन संसारका अरु देशमा पनि जनताहरु नेतासँग रुष्ट भएका घटनहरु पाइन्छ।यस्तै घटना मध्ये मेक्सिकोको एउटा सानो शहरमा मेयरको चुनावमा भएको नेताप्रति जनताको निराशा उदाहरण रुपमा लिन सकिन्छ। त्यस शहरको मेयरको चुनावमा लड्ने सबै अपेक्षित उम्मेदवारसँग त्यहाँका जनताहरुको यति धेरै नैराश्यता रह्यो कि आगामी मेयरको चुनावमा सबै उम्मेदवारको विरोधको रुपमा बिरालोलाई अफ्नो उम्मेदवार बनाइ सामाजिक सञ्जालमा प्रचार शुरु गरे। ... बाँकी अंश»
कुकुरका शौखिनको ४ बर्ष देखि कुकुरकै रुप !
२०७२ चैत २१ आइतबार, एजेन्सी। मानिसहरुको शोख पनि विचित्रकै हुदो रहेछ। मानिसहरु चर्चामा आउन अनेक प्रकारको तडकभडक गर्ने गर्दछन्। लाग्छ कि हामी आफै ठूलो बिनासको प्रतिक्षामा छौ र भगवानको सिर्जनाको विपरीत कार्यहरु गर्न थालेका छौ। ब्राजिलमा एक व्यक्तिले शल्यचिकित्साद्वारा आफ्नो अनुहार कुकुरको अनुहारमा परिवर्तन गरेका छन् । यो संसारको पहिलो घटना हो जसले आफ्नो शोखका लागि आफ्नो अनुहारनै परिवर्तन गरी डगम्यान बनेका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७२ चैत २० शनिबार, एजेन्सी। आधुनिक समाजको व्यस्त जीवनका कारण विश्वभरका मानिसहरु तनावको जिन्दगी बिताउन बाध्य हुने गरेका छन् । तनाव हटाउन चाँड पर्वमा मन दिएर मनाउनेहरु पनि कम छैनन् । ब्यस्त जीवनबाट थाकेको मन बिसाउने थलोको रुपमा चाँड पर्वहरु मनाउने कोही छन भने खर्च हुने लोभमा चाँड पर्व नआए हुन्थयो भन्नेहरु पनि कम छैनन् । यस्ता पर्वहरु देश अनुसार फरक फरक ढंगले मनाउने पनि धेरै छन् । ... बाँकी अंश»